Tinye Ugbu a Maka UNDP Job na Abuja maka Onye Nlekọta Mmemme 2021: Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a
Tee Ugbu a Maka UNDP Job na Abuja 2021: Are na-achọ ọrụ na Naịjirịa 2021? Ga-achọ ịrụ ọrụ na UNDP? Ọzọkwa, ị gaghị eche ma ọ bụrụ na anyị eduzi gị otu ị ga - esi tinye akwụkwọ maka nyocha ọrụ UNDP na Nigeria na gafere? Ọ bụrụ ee, gaa n'ihu gụọ.
Mmemme mmepe nke United Nations (UNDP) na-enyere mba ndị na-emepe emepe aka ịdọrọ ma jiri enyemaka rụọ ọrụ nke ọma. N'ime ọrụ anyị niile, anyị na-akwado nchedo ikike mmadụ, mmepe ikike na ikike ụmụ nwanyị.
UNDP na-ewe ndị ọrụ iji mejupụta ọnọdụ dị n'okpuru:
Aha ọrụ: Onye enyemaka mmemme - Nigeria Partnership na reme Ka Ikpe Ikpe Ikpe Dị Ike Na-azaghachi Iyi ọha egwu (n'okpuru ọrụ zuru ụwa ọnụ "Iwusi usoro iwu iwu megide iyi ọha egwu"): GLOR35
NJ Job: 4234
Location: Abuja, Naijiria
Mpaghara Omume - Ezinụlọ Job: Udo Udo
Dị acdị: Servicegwọ Ọrụ (SC)
Dị gha: Mpụga
Lọ ọrụ: Africa
Oge nkwekọrịta: Oge izizi nke otu afọ
Ọnọdụ a dị na Unitedlọ Ọrụ Mba Ndị Dị n'Otu na Ọgwụ na Mpụ (UNODC) na Abuja, Nigeria (CONIG).
Rụkọ ọrụ ọnụ na otu ndị ọzọ na-akwado ndị ọrụ na CONIG, onye ọrụ ahụ ga-ahụ maka ịnye ọrụ, nhazi, logistical na nhazi na ọrụ ahụ.
Nke a ga-agụnye ịme atụmatụ na imezu ọrụ dị iche iche, logistical na nhazi maka ọrụ mmemme ahụ; organizinghazi njem nke ndị ọrụ ngo, ndị ọkachamara na ndị sonyere; ịkwadebe atụmatụ ọnụego yana ịchekwa atụmatụ mmefu; imeputa ma kesaa akwukwo na oge; akwado omume nke saịtị; ịkwadebe na inye nkwado izugbe izugbe, wdg.
Dị ka achọrọ, s / ọ ga-enyekwa nkwado maka ị nweta na nkwado nke mmefu ego na njikwa ego maka ọrụ ahụ.
Onye ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ n'okpuru nlekọta nke ndị ọrụ (s) ahọpụtara ahaziri nke ọma na nduzi nke Onye Nchịkọta Ọrụ na ntụzịaka zuru oke nke onye nnọchi anya UNODC na Onye Isi Mmemme.
Ọkwa maka post ahụ bụ SB3 / 2 (ya na G5).
Onye nwere ikike ga-arụ ọrụ ndị a:
Nye nkwado ọrụ, nhazi, logistical na nhazi na ọrụ ahụ;
Soro onye nhazi oru ngo a, ndi oru ndi ozo na ndi isi na ndi ozo nyere aka iji kwado na nkwado nke nhazi na nhazi a choro maka oru di iche-iche.
Nyere onye nlekota oru (s) na ndi isi oru ngo ndi ozo enyere aka ka ha mezuo oru ha maka oru a site na iru oru nkwado di iche iche.
Amata na mezuo nhazi, nhazi na nhazi nhazi achọrọ maka ụyọkọ nke ọrụ mmemme, dị ka nzukọ ọmụmụ, ọgbakọ na nzukọ.
Nke a gụnyere: ịchọpụta ọrụ achọrọ na ịhazi maka ịzụ ahịa ha, ịhazi njem na ebe obibi nke ndị ọrụ ngo, ndị ọkachamara na ndị sonyere; ịkwadebe na igbasa akwụkwọ n’oge; na-akwado omume saịtị, wdg.
Nye nkwado na UNODC Security Focal Point na nchekwa ndị ọrụ UNODC.
Nye ndụmọdụ na ime ndokwa maka mbupu na nnata nke ọfịs na ọrụ ngo na akụrụngwa na mmetụta ezinụlọ; tinyere nhichapụ omenala.
Nye ndụmọdụ ma nyere ndị ọrụ aka na ndị dabere na ha aka site na nhazi arịrịọ maka visa, kaadị njirimara, ikikere ịnya ụgbọ ala na akwụkwọ ndị ọzọ metụtara ndị ọrụ dịka ihe ndị United Nations chọrọ na obodo nke ebe ọrụ.
Mee oru ndi ozo dika ichoro, dika izugbe izugbe, na-aga nzuko ma kwadebe nkeji nke nzuko, wdg.
Nye nkwado maka ị nweta na mmefu ego na njikwa ego maka ọrụ ahụ: na-arụkọ ọrụ ọnụ na Budget na Finance Assistant nke oru a, kwado ọrụ na mpaghara a dịka ọ dị mkpa
Soro ndị isi Mmemme na-arụkọ ọrụ ma jere ozi dị ka achọrọ
Kwadebe atụmatụ ọnụahịa ma jigide atụmatụ mmefu na nyocha maka mmemme ọrụ.
Nyere aka na nkwukọrịta nkịtị na nke na-esote ma soro ndị ụlọ ọrụ gọọmentị na ndị ọchịchị, ndị nnọchi anya mpaghara nke ndị otu United Nations ndị ọzọ, ndị NGO, ndị otu ọha na eze, ndị ọrụ enyemaka na ndị mgbasa ozi gbasara iwu UNODC na ihe gbasara ọrụ.
Nọgide na-enwe mmekọrịta na nhazi oge niile n'ime CONIG yana ngalaba Mgbakọ Na-eyi ọha egwu na Mpaghara mpaghara maka Africa na Middle-East; kọntaktị na UNDP na ndi otu ndi otu UN ndi ozo banyere ihe nlekota oru nke jikotara mmejuputa oru.
Na-anakọta, chịkọta ma debe faịlụ na ozi metụtara ọrụ mmemme, mepụta ntinye maka akụkọ mmemme na netwọkụ ozi dị mkpa ma jigide usoro ọrụ nke ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara; debe ndekọ zuru ezu na mmemme ọrụ, gụnyere agendas, ndepụta nke ndị sonyere, nkọwa kọntaktị ndị ọkachamara na akụkọ.
Nyere aka na njikwa akụ kwesịrị ekwesị, nyocha, ndekọ na mkpofu, na ịkwadebe akwụkwọ nnata na Nnyocha (R & I) maka ntinye aka na ngalaba azụmaahịa dị mkpa na nyocha ọrụ nyocha.
Inye aka na ịkwadebe mmemme na lọjistik maka ndị ọbịbịa na-eleta, ndị ozi, ndị nnọchi anya na ndị nnọchi anya onyinye.
Mee oru ndi ozo dika enyere gi aka.
Ọkachamara na nchịkwa oru ngo na nzukọ gụnyere ezigbo ihe ọmụma na nghọta nke echiche na ụzọ dị mkpa maka usoro mmefu ego na njikwa ego; ihe omuma banyere iwu na iwu nke United Nations tinyere imata atumatu na usoro UN ka ha metutara atumatu mmefu ego na nhazi ego; gosipụtara ikike ọkachamara na njikwa nke usoro nhazi; ikike ịrụ ọtụtụ ọrụ nchịkwa, gụnyere atụmatụ mmemme na ịhazi na nchịkwa mmadụ; ikike ịkọwapụta ihe egwu nwere ike ịme ma mee ntụgharị, dịka achọrọ.
Na-egosi mpako na ọrụ na rụzuru; na-eji nlezianya na ịrụ ọrụ nke ọma n'ịmezu nkwa, na-edebe oge a kara aka na ịrụpụta ihe; onye ọkachamara na-akwali kama nchegbu onwe ya; na-egosi ịnọgidesi ike mgbe nsogbu ma ọ bụ nsogbu ndị tara akpụ chere ya ihu; na nkwenye gosipụtara na ụkpụrụ nke United Nations, ọkachasị iguzosi ike n'ezi ihe na omume kwa ụbọchị.
Kedụ ihe ị chọrọ itinye ugbu a maka UNDP Job na Abuja maka onye enyemaka Mmemme 2021? Ana m arịọ gị ka i jiri otu ihe ahụ ohere ịkọrọ ndị ọzọ ozi a site na iji nke anyị Facebook, Twitter, or Google+ share button n'okpuru.
Tinye Ugbu a Maka Ọrụ Ndụmọdụ na UNDP, Abuja - 2016
Nationslọ Ọrụ Nationsmụaka nke United Nations Job Vacancy Portal 2021 www.unicef.org
Ọrụ dị na Abuja 2021/2022 Ngwa chọrọ na ntozu
Mmemme Mgbakọ Ntinye Aka nke United Nations 2021 www.undp.org
Applicationdị Nchịkọta Mmemme Maka Mmemme nke Mba Ndị Dị na United Nations 2021/2022
UNICEF Job Maka Nlekọta Nlekọta 2021 Tinye Ugbu a
UNICEF Job Maka Onye Nlekọta Ahụike 2021 Tinye Online Ugbu a
Tags: Ọrụ Abuja, Tinye Ugbu a Maka UNDP Job, Tinye Ugbu a Maka UNDP Job 2021, Tee Ugbu a Maka UNDP Job na Abuja, Tinye Ugbu a Maka UNDP Job na Abuja 2021, Tinye UNDP Ugbu a Maka Job na Abuja maka onye enyemaka mmemme, Tinye Ugbu a Maka UNDP Job na Abuja maka Mmemme Mmemme 2021, Tinye Ugbu a Maka Ọrụ UNDP, Tinye Ugbu a Maka Ọrụ UNDP 2021, UNDP
« Portal Staff Portal www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Mmelite Kachasị ọhụrụ
Fenix ​​International Shortlisted Candidate 2021/2022 PDF Ndepụta Download »